I-Plantronics BackBeat FIT, isandi esingenazingcingo semidlalo [SWEEPSTAKES] | IPhone iindaba
I-Plantronics BackBeat FIT, isandi esingenazingcingo semidlalo [SWEEPSTAKES]
Ikamva lee-headphone sele lingaphezulu kokugqitywa: iintambo kufuneka zinyamalale. Ukuba ii-headphone eziphambili azikuthandabuzi ukuza kubuchwephesha obungenazingcingo, ii-headphone zezemidlalo kudala zibheja kakhulu kubuchwephesha beBluetooth. Ukudlala imidlalo kufuna inkululeko yokuhamba, kwaye intambo eqhagamshelwe kwi-iPhone yakho kwelinye icala inyanzela ukuba uphathe ifowuni kunye nawe, into eneemodeli zangoku ezingaphezu kwe-intshi ezintlanu ayihlali ikhululekile, kwelinye icala Intambo isoloko ikhonkco apho ingafanelekanga. IPlitronics luphawu ekudala lusinika ii-headphone ezingenazingcingo ezilungiselelwe iimbaleki, kwaye Imodeli yayo entsha ye-BackBeat Fit lukhetho oluhle kakhulu kwabo bafuna ukukhanya, ii-headphone ezikhululekileyo ezinesandi esifanelekileyo kunye nokumelana nemozulu engalunganga.. Le modeli inokuba yeyakho, ke funda ngononophelo kude kube sekupheleni kweposti.
1 Intuthuzelo iphezulu
2 Ukuxhathisa kwamanzi kunye nokubila
3 Ngesicelo se-iOS kunye ne-Android
4 Ukuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-8
5 Umgangatho wesandi ngaphandle kokuzahlula
8 Inzuzo kunye nexabiso
9 Ngaba ufuna ukuphumelela ezinye ii-headphone?
Ubume bee-headphone benzelwe ukuba zilingane ngokugqibeleleyo kwindlebe yakho kwaye zibambe ngaphandle kokungonwabi. Izinto ezenziwe ngazo ukongeza kwi-anti-slip ziyaguquguquka kwaye ukubeka ii-headphones kulula kakhulu, kwaye isiqwenga esifakwe kumsele wendlebe sihambelana kakuhle kwaye silungisiwe ukuze ii-headphone zingawi kunye nokuhamba okuqhelekileyo kwawo nawuphi na umsebenzi wezemidlalo. Ungabaleka okanye wenze imisebenzi yokuzivocavoca ngaphandle kokuhlengahlengisa ii-headphone rhoqo, ke kuya kufuneka ukhathazeke ngokuphucula amanqaku akho, hayi ukuba angawa.
Njengengongoma embi ukubonisa ukuba zibandakanya kuphela ubungakanani bepad enye, kwimeko yam ilingana ngokugqibeleleyo, kodwa abanye abantu abaneendlebe ezincinci banokufuna encinci. Ukufikelela kulawulo kukwabulela ngokulula kwinto yokuba zikumaqhekeza abekwe endlebeni, awuzukukwazi kuphela ukulawula ukudlala komculo kodwa uya kuba nakho ukuphendula iminxeba.
Ukuxhathisa kwamanzi kunye nokubila
Ii-headphone zemidlalo kufuneka zikulungele ukumelana nemozulu engathandekiyo, kunye nokubila, kwaye ngezi BackBeat Fit awuyi kuba nangxaki ngenxa yokuba zichasene nazo zombini. Isiqinisekiso se-IP57 siqinisekisa ukuba akuyi kubakho ngxaki ngothuli okanye ngamanziNangona zenzelwe ukuba zisetyenziswe kwimidlalo yamanzi njengoko kubonakala kwinto yokuba itekhnoloji yeBluetooth ayisebenzi phantsi kwamanzi. Izinto ezenziwe ngazo ziguquguqukayo kwaye zithambile ekubanjweni, kwaye ukugqitywa kwemibala eqaqambileyo kuya kufuneka kongeze izinto ezibonakalayo ngasemva eziza kongeza ukubonakala okungakumbi.
Ngesicelo se-iOS kunye ne-Android
I-Plantronics ihlala yongeza enye into kwiiseti zentloko zayo kunye neapp evumela ukuba ulawule eminye imisebenzi yentloko. Enkosi kwisicelo se-iOS kunye ne-Android ungalutshintsha ulwimi lwezilumkiso, uhlaziye i-firmware yeefowuni kwaye ulawule nokuba yeyiphi na isixhobo ofuna ukudibanisa nayo. Xa uzivula, ngaba uqhagamshele kwi-iPhone kwaye ufuna ukuzisebenzisa nge-iPad yakho? Kuya kufuneka uvule usetyenziso kwaye ukhethe i-iPad, ukhululeke ngakumbi kunokuhambahamba uqhagamshela kwaye unxibelelanisa izixhobo ngokwendlela ofuna ukuyisebenzisa ngalo mzuzu.
Ukuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-8
Ibhetri ihlala iyindawo ebuthathaka yezi headphone, kodwa ezi BackBeat Fit zithembisa ukuya kuthi ga kwiiyure ezisibhozo zobomi bebhetri kwityala elinye. Nangona ndingakhange ndikwazi ukuyiqinisekisa kuba andikaze ndiyisebenzise kangangeeyure eziyi-8 zilandelelana, izibalo zam zisondele kakhulu kwelo xesha kubomi bokwenyani, kwaye kuxhomekeke kwindlela ozisebenzisa ngayo ungazonwabela ngaphandle kwengxaki iveki. Kwakhona, enkosi kwisibonisi sebhetri esithi i-iOS ibandakanya ibha yomgangatho, kunye nezilumkiso eziviwayo ezihlala zikuxelela ukuba ushiye ixesha elingakanani lokumamela ngalo lonke ixesha uzivula, ayisoze ikothuse kwaye ngekhe ukwazi ukonwabela umculo owuthandayo. Kwaye ukuba oku kuyenzeka, Intlawulo yemizuzu eyi-15 iya kukunika ukuya kwiyure yokuzimela.
Umgangatho wesandi ngaphandle kokuzahlula
Ukudlala ngaphandle ngaphandle ngee-headphone ukumamela umculo kuyonwabisa, kodwa asinakulibala ukuba ayicetyiswa kwaphela into yokuzahlula kwihlabathi elisingqongileyo, nokuba siselizweni okanye edolophini. Sebenzisa ii-headphone ezikukhetha ngokupheleleyo ngaphandle ngaphandle yimpazamo enkulu enokuthi ikhokelele kwiingozi, yiyo loo nto ezi BackBeat Fit zikunika umgangatho olungileyo kunye namandla afanelekileyo akuvumela ukuba wonwabele umculo wakho ngaphandle kokuba ubekelwe bucala koko kukungqongileyo. Umgangatho weaudiyo ungaphezulu kokulungileyo, nabani na okhe wazama ii-headphone ezivela kolu hlobo uya kwazi ukuba akukho zimanga zingathandekiyo., kwaye ivolumu ingaphezulu kokwaneleyo naxa uziqhelisa imidlalo esixekweni ngengxolo yezithuthi ngeenxa zonke. Uluhlu lweBluetooth yinto yesiqhelo kwezi zixhobo, ukuya kuthi ga kwi-10 yeemitha. Ukuziqhelanisa andikasokoli kunxibelelwano xa ndithathe i-iPhone yam, isandi ibikumgangatho olungileyo ngaphandle kokusika.
I-Plantronics BackBeat Fit lukhetho oluhle kakhulu kwabo bafuna iseti yentloko yeBluetooth enokuzimela ngokwaneleyo kwiintsuku ezininzi kunye nomgangatho wesandi obahlula ngokucacileyo kwezinye iimodeli ezifikelelekayo. Izinto zayo ezinokumelana namanzi kunye nothuli ziya kukwenza uxhalabe malunga nokuhlaselwa kwangaphandle, kwaye ukusetyenziswa kwayo kukhululekile kubasebenzisi abaninzi.Nangona abo baneendlebe ezincinci banokuba nengxaki yokungabandakanyi iipads zeendlebe ezahlukeneyo. Ixabiso labo lemali lilungile, kwaye ungabathenga kwi-Intanethi kwiivenkile ezinje Amazon.
Izityalo zangasemva eziBuyayo
Ukugqitywa okuhle kunye nezixhobo
Isandi esihle ngaphandle kokusika
Ulawulo lwevolumu oluhlanganisiweyo
Ukuzimela kweeyure ezingama-8 ekudlaleni ngokuqhubekayo
Uluhlu lweemitha ezili-10
Ayibandakanyi iipads zobukhulu obahlukeneyo
Ngaba ufuna ukuphumelela ezinye ii-headphone?
Njengoko sixoxile ekuqaleni kweposti, ungaphumelela iyunithi yezi ntloko zefowuni. Ukwenza oku, kuya kufuneka uthathe inxaxheba kukhuphiswano lwethu olulula olusekwe kumanyathelo amabini:
Ndwendwela iphepha lethu ku-facebook kwaye ufumane ivoti yelothari.
Mema bakho bahlobo ukubona nokuthatha inxaxheba kwirafuli. Kumhlobo ngamnye ommemileyo ngokuchanekileyo uya kufumana itikiti elongezelelweyo kukhuphiswano ... Zihlobo ezingenamkhawulo! Ungathandabuzi kwaye umeme abahlobo abaninzi kangangoko ukuba bafumane ibhaso. Ungamema abahlobo bakho ukuba bakuncede nge-imeyile, i-Facebook, i-twitter, iGoogle Plus, iTumblr okanye iPinterest. Khumbula ukuba umhlobo ngamnye ongena kukhetho olunye lokufumana ibhaso.
Kwaye nonke nina nintsha Sincoma ukuba ubhalise kwincwadana yethu ukuze ufumane zonke iindaba ngokunqakraza apha.
Izityalo ze-Plantronics BackBeat FIT
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Plantronics BackBeat FIT, isandi esingenazingcingo semidlalo [SWEEPSTAKES]
UDaniel madrazo sitsho
Umgangatho wesandi ????? Andikaze ndizisole ngokuthenga kakhulu. I-euro ezingama-80 kwaye zivakala zibi ngakumbi kunezo ze-AVE. Ukongeza ekubeni nomthamo omncinci kakhulu, ii -apps ezimbi kunye nenkxaso ye-null.
Baya kuba bekuhlawule kakuhle.
Phendula kuDaniel Madrazo
Imveliso enexabiso le-297 yeAmazon 5-star ratings kunye ne-112 yeenkwenkwezi ezi-4 zokuthetha iyazithetha. Iyafana nengcaciso yakho.
ULuis Alberto Martinez sitsho
Molo Luis, uhlalutyo olukhulu, nangona ndingenakugqiba phakathi kwezi okanye i-powerbeats 3 ngenxa ye-chip ye-w1, okanye ubone ukuba kunokwenzeka ukuba uza kuzijonga ezi zinto.
Ndinomnye umbuzo, unxibe ntoni? Ndikhangela enye ebhityileyo kodwa engagubungeli ngaphantsi ukuze ndiyisebenzise kunye nedokhethi yesithethi.
Phendula uLuis Alberto Martínez
I-chip ye-W1 ye-Apple iya kubonelela ngee-headphone zakho ngemisebenzi ekhethekileyo enjengokubambisana ngokuzenzekelayo ngokweakhawunti ye-iCloud, into entle. Ungathandabuzi ukuba ezinye ii-Beats nge-W1 ziwela ezandleni zethu siza kuphinda siziqwalasele, kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba siyakwenza ii-AirPods nje ukuba zifumaneke.
Mholo emvakwemini. Ndisithi ndinazo ngaphezulu kweminyaka emibini, emva kokukhangela, ukuthenga nokubuyisa ezinye iimodeli ezahlukeneyo, ekugqibeleni ndizifumene. Ukusukela ngoko andikaze ndiphume ngaphandle kwabo, nditsho xa ndiphuma ndibaleka nabo kancinci ndibanxiba ngevolumu ephantsi njengo "umculo ongasemva" kwaye ndimamela ngokugqibeleleyo omnye umntu.
Elona volumu liphezulu lingaphezulu kokwamkelekileyo, nangaphezulu, nakwiingoma ezikhuthazayo andihlali ndizikhuphelela kuzo zonke iindlela. Kungenzeka ukuba ngokungazibandakanyi ngokupheleleyo (into endivumelana nayo kwinqaku, kubonakala kufanelekile ukwenza njalo) isandi asigubungeli njengale "seendlebe" zentloko, ibhanti yentloko okanye nekhompyuter ephezulu. inkcazo…
Ndizisebenzisa ikakhulu kwezemidlalo, ulawulo luyinto enomdla, iyahambelana ngokupheleleyo ne-iPhone, kubandakanya uSiri. Okwam, owakha wakhathazeka kukukhangelwa kweefowuni ezifanelekileyo zokubaleka, bahambisa ngokugqibeleleyo. Bachithe ihlobo lobushushu obunganyamezelekiyo, ubusika obubandayo kunye nemvula, umdyarho waseMadrid udlule emanzini, njl.
Kwaye apho bayaqhubeka nokulwa, kubonakala kum imveliso eye yavela kakuhle kum kwaye xa ndilifundile inqaku khange ndikwazi ukunqanda ukuphawula kuluvo lwam, andinakuvuma ngakumbi.
UJero Villar Alonso sitsho
Kuyenzeka ngohlaziyo lweFirmware, kule BACKBEAT FIT; Vumela ukudibanisa
kanye; I-BackBeat 81665-01 Ifowuni kunye neAdapter yeAudio. Ukumamela iTV okanye ikhonkco
Mculo kwaye kulindelwe ukuba kukho iifowuni, ukuze ukwazi ukuziphendula ngazo.
Phendula kuJero Villar Alonso
Ngaba ngumzobo owenzelwe iSpain kuphela?
Hayi yeyamazwe aphesheya
UJeronimo Villar Alonso sitsho
Ukuphoxeka: I- "Fit 2016 (PLT)" kunye neqabane layo eliyekisiweyo "iBackBeat 906".
Ndidinga ukuzama uhlaziyo lweFirmware, kule BACKBEAT FIT 2016; Xa ubamba ngentloko (njengoko bebala kwiphepha le-«Fit 2016») 8 izixhobo ezahlukeneyo zebluetooth, bendithembele ukuba ekugqibeleni, Vumela ukunxibelelana ngaxeshanye, umnxeba kunye naso nasiphi na isixhobo seBluetooth, ukumamela umjelo womculo , iPC okanye iTV, njengakudala kwaye kuyekisiwe "iBackBeat 906". Ungaphendula ngayo iifowuni, ngaphandle kokuyeka ukumamela, umculo okanye nasiphi na isandi esivela kwiPC okanye kwiTV, xa usika iifowuni.
Bacebisa mna (indlu) ukuba ndicele uhlaziyo lwe- «FIT» kunyaka ophelileyo, ukuba «USETYENZISWE», abanye ubungakanani babo babaqhubi beenqwelo moya, (ubukhulu obukhulu). "(Andithandi)". Kuphela aba bancinci, kuba nabo bakulungele ukuhamba uhambo, (andiziboni ndihamba ngeeminqwazi zePilot).
Nge «BackBeat 906», ndihlala ndihambahamba, kodwa mdala kakhulu kwaye banxibe.
Isiphelo: Okukhona kungoku kwaye okwangoku, kokukhona inkunkuma ibiza kakhulu, kuphela umgangatho ophantsi "weShishini".
Phendula uJeronimo Villar Alonso
I-Glympse isivumela ukuba sabelane ngendawo yethu ngexesha lokwenyani kunye nalo naliphi na iqonga
Chukumisa i-Hair Salon 2 yasimahla kangangexesha elithile